မိုဘိုင်း ဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် စက်ရုံ - ရှန်ကျန်း Xiangfu တိကျစွာ စက်မှုလုပ်ငန်း Co. , Ltd
ဟာ့ဒ်ဝဲ သံမဏိ မှို
တိကျစွာ သေ Casting
မော်တော်ကား မှို ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှို အစိတ်အပိုင်းများ
ဒစ်ဂျစ်တယ် မှို ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နေအိမ် ပစ္စည်းကိရိယာ မှို
နေအိမ် စီးရီး အစိတ်အပိုင်းများ
လှည့် မှို ကုန်ပစ္စည်း စီးရီး
အပြင်ဘက်မှာ ရေ သတျတော
CNC တိကျစွာ စက်ယန္တရား
Aero အာကာသ အစိတ်အပိုင်းများ
အရှိန်အလွန်မြန်သော မီးရထားလမ်း အစိတ်အပိုင်းများ
တိကျစွာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ
Tele ဆက်သွယ်မှု အစိတ်အပိုင်းများ
စိတ်တိုင်းကျ လေဟာနယ် ဖွဲ့စည်းခြင်း ထုတ်ကုန်များ
ကော့တမ် ပြသရန် စီးရီး
အော်တို အပို အစိတ်အပိုင်းများ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ပုလင်း မှုတ် မှို
သတျတော မှုတ် မှို
သိုလှောင်ခြင်း မှုတ် မှို
သောက်ပါ ပုလင်း မှုတ် မှို
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC တိကျစွာ စက်ယန္တရား > Tele ဆက်သွယ်မှု အစိတ်အပိုင်းများ > မိုဘိုင်း ဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစိတ်အပိုင်းများ
နေအိမ် ပစ္စည်းကိရိယာ ဟာ့ဒ်ဝဲ မှို
စားသုံးသူ အစိတ်အပိုင်းများ ဟာ့ဒ်ဝဲ မှို
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ ဟာ့ဒ်ဝဲ မှို
ကား အစိတ်အပိုင်းများ ဟာ့ဒ်ဝဲ မှို
မိုဘိုင်း ဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစိတ်အပိုင်းများ
The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း မိုဘိုင်း ဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစိတ်အပိုင်းများ ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် မိုဘိုင်း ဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစိတ်အပိုင်းများ.
Xiangfu CNC သည်တိကျမှန်ကန်သောမိုဘိုင်းဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုစက်တွင်အသုံးပြုသည်
၁။ သော့ချက်စာလုံးများ - CNC စက်၊ CNC အစိတ်အပိုင်းများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ တိကျမှန်ကန်သောစက်ကိရိယာများ။
2. အမျိုးအစား: CNC စက်အစိတ်အပိုင်း။
3.Mould ပစ္စည်းများ: SS / AL16061 / သတ္တုစသည်တို့
4. လျှောက်လွှာ: မိုဘိုင်းဖုန်း။
5.Surface ကုသမှု: ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုအဖြစ်။
6.Certification: ISO9001-2008, IATF16949
၇။ Support Format - 3D ပုံ၏ STEP (သို့) IGS ပုံစံ
8. ထုပ်ပိုး: စံတင်ပို့ထုပ်ပိုးသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။
ငွေသွင်းခြင်းကာလ - ငွေပေးချေပြီးနောက် ၁၅-၆၀ ရက်အတွင်း။
11.Supply capacity: 10000pieces / စတော့ရှယ်ယာထဲမှာပါးစပ်နှုန်း
၁၂။ ဈေးနှုန်းအချိန် - ဖောက်သည်များ၏ရှင်းလင်းသောပုံဆွဲမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co, Ltd. သည်precisionရိယာ ၁၀,၀၀၀ မှ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ကြားရှိစက်ရုံwithရိယာရှိသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စာရွက်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းဌာန၊ ပလပ်စတစ်မှိုလုပ်ငန်းဌာန၊ တိကျသော CNC စက်ဌာန၊ ပုံသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းဌာန၊ မျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်းဌာနနှင့်အခြားပရိဘောဂလုပ်ငန်းဌာနရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဆက်သွယ်ရေး၊ တိကျမှန်ကန်သောကိရိယာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများ၊ မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်လာရန်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။
ပလတ်စတစ်မှို Catalog:Pladtic မှိုစီးရီး: Injection မှိုထုတ်ကုန် / မှုတ်ထုတ်ကုန် / လှည့်မှိုထုတ်ကုန် Vacuum Forming Products
ဟာ့ဒ်ဝဲမှို Catalog:ဟာ့ဒ်ဝဲမှိုပစ္စည်းစီးရီး: Die Casting / Stamping / Forging Parts / Sheet Metal / Steel မှို
CNC စက်စာရင်းCNC စက်စီးရီး - တိကျမှန်ကန်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ / အော်တိုအပိုပစ္စည်းများ / Aero အပိုပစ္စည်းများ / လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များ / ဆက်သွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းများ / အမြင့်ရထားလမ်းအစိတ်အပိုင်းများစသည်တို့
3D ပုံနှိပ်ခြင်း Catalog:3D Printing Series: Meatal 3D Printing / Plastic Material 3D Printing
က) ပုံမပါသောဖောက်သည်များအတွက် 3D / 2D ပုံဆွဲဒီဇိုင်းကိုပေး
ဂ)3~5ရက်ဒီဇိုင်းအချိန်
က) ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်း (ပုံဆွဲခြင်း၊ မှို၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပစ္စည်းများ)
ခ) ပစ္စည်းများစွမ်းဆောင်ရည် (ခိုင်မာသော, အပြစ်အနာအဆာရှာဖွေတွေ့ရှိစသည်တို့)
ဂ) ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်း (အရွယ်အစား၊ သည်းခံနိုင်မှု၊ ကြမ်းတမ်းမှု၊ နမူနာစသည်တို့)
ခ) နမူနာအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း OEM / ODM စီးရီး
A: MOQ သည်ပါးစပ်တစ်ရှူးလျှင် ၁၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
Q: R&D နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။
A: သုံးစွဲသူသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပါတယ်။ သင်လိုအပ်လျှင်ဖိုင်များကိုလုပ်ပါသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
မေး။ ။ ပို့ချိန်ကအတူတူလား။
A: ငွေစက္ကူအစိတ်အပိုင်းများကိုငွေပေးချေပြီးနောက် ၃ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းပြုလုပ်ရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် OEM သို့မဟုတ် ODM ထုတ်ကုန်များဖြစ်ပါကသင်နှင့်သင်ပို့ဆောင်မည့်အချိန်ကိုအတည်ပြုပါမည်။
A: သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများနှင့်အညီငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 30% TT သိုက်အားအကြံပေးပါသည်။ ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းမပြုမီလက်ကျန်ငွေကိုပေးချေပါမည်။
Q: သင် OEM / ODM ကိုလက်ခံရရှိပါသလား
ဟုတ်တယ်။ ကျနော်တို့ 15years OEM အတွေ့အကြုံထက်ပိုရှိသည်။
hot Tags:: မိုဘိုင်း ဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစိတ်အပိုင်းများ, တရုတ် ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူများ လုပ်သည် in တရုတ် စိတ်ကြိုက်, စျေးပေါသော စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း ဝယ်ပါ အမြင့် အရည်အသွေး, အကြမ်းခံ, အနိမ့် စျေးနှုန်း, In ကုန်ပစ္စည်း အခမဲ့ နမူနာ
ဆဲလ် ဖုန်း အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများလူမီနီယမ် ဆက်သွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများ
လိပ်စာ: B1227-1288, ချစ်သူ သိပ္ပံပညာ နှင့် နည်းပညာ အဆောက်အ ဦး, 1st လမ်း ကြာရှည် ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်
မူပိုင်ခွင့် @ 2019 Shenzhen XIANGFU ဆုံးဖြတ်ချက် စက်မှုလုပ်ငန်း CO ။ , LTD ။ အားလုံး အခွင့်အရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်